Nice Help | Nidaamka Gaaritaanka
La cusbooneysiiyay: Diseembar 2019.
www.nice.help waxay ku dadaalaysaa inay hubiso in adeegyadeeda ay u heli karaan dadka naafada ah. www.nice.help waxay maal gelisay xaddi badan oo ilo ah si ay gacan uga geysato hubinta in degelkeeda loo fududeeyay adeegsiga iyo helitaanka badan ee loogu talagalay dadka naafada ah, iyadoo la rumeysan yahay in qof kastaa xaq u leeyahay inuu kula noolaado sharaf, sinnaan, raaxo iyo madaxbanaanida.
Gaaritaan ku hel bogga www.nice.help
www.nice.help ayaa diyaarinaya Isticmaalka Widget Isticmaalka Websaydhka Isticmaalaha taas oo ay ka faa'iidayso isku xira gelitaanka server-ka. Softiweerku wuxuu u oggolaanayaa www.nice.help inay hagaajiso u hoggaansamkeeda tilmaamaha marin-u-helka Maaddada Mareegaha (WCAG 2.1).
Awood u siinta Liiska Helitaanka
Liiska marin u helida www.nice.help waxaa lagu awoodsiin karaa adigoo gujinaya icon menu accessility-ka ka muuqda geeska bogga. Ka dib markii aad kicisay menu ka mid ah marin u helka, fadlan sug waxoogaa menu ka mid ah marin u helista oo ku soo dhaceysa gabi ahaanba.
www.nice.help waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si ay marwalba u wanaajiso helitaanka boggeeda iyo adeegyadeeda iyada oo la aaminsanahay in ay tahay waajibaadka wadajirka ah ee anshaxeed in aan u oggolaano adeegsiga aan kala go 'lahayn, la heli karo iyo aan laga horjoogsan sidoo kale kuwa naafada ah.
In kasta oo dadaalkeenna aan ku sameyneyno dhammaan boggaga iyo waxyaabaha ku jira www.nice.help ay si buuxda u heli karaan, waxyaabaha qaar waxaa laga yaabaa in aan wali si buuxda loo waafajin heerarka marin u adkeynta. Tani waxay noqon kartaa natiijo ka timid markii aan la helin ama aan la helin xalka ugu habboon ee farsamada.
Haddii aad dhibaato kala kulanto waxyaabaha ka mid ah www.nice.help ama aad u baahan tahay caawimaad qayb kasta oo ka mid ah bartayada internetka, fadlan nala soo xiriir inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah sida hoos ku faahfaahsan waxaanan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawino.
Haddii aad jeceshahay inaad soo sheegto arrinta marin u helka, aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad, fadlan kala xiriir Taageerada Macaamiisha sida soo socota: